အင်ဂေါင်ဝမဂ်နတ်မင်းကြီးသည် ညာလက်ဖြင့် ရွှေခွက်ကိုကိုင်၊ ဘယ်လက်ဖြင့် ငွေခွက်ကိုကိုင်ပြီး မဟာအဏ္ဏ၀ါအတွင်းမှ ရေတစ်ခွက်စီ ခပ်ယူပြီးသော် ထိုရေများဖြင့် မြောက်ဘက်ရှိ တောင်ထိပ်များပေါ်သို့ လောင်းချလိုက်ရာ ညာဘက်မှ မေခမြစ်၊ ဘယ်ဘက်မှ မလိခမြစ်ဟူ၍ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်ဟူ၏။ ထိုမြစ်နှစ်သွယ်သည် အစဉ်အတိုင်း စီးဆင်းသွားကြ၍ ချင်ခရန်ဂါ ဒေသ အနီးတွင် ပေါင်းဆုံမိကာ ဧရာဝတီမြစ်ဟူ၍ ဖြစ်လာခဲ့လေသည်။ ထို့နောက် ဧရာဝတီမြစ်သည် အရပ်ဒေသပေါင်းစုံ ဖြတ်သန်း၍ ပင်လယ်ထဲသို့ စီးဝင်လေသည်။ ထို့ကြောင့် ကချင်ရိုးရာတွင် ဧရာဝတီကား ကမ္ဘာလောက၏ အစအဦးမြစ်ပေတည်း။
ကြက်ကျ ကြက်ယက် ရွှေလျက်သွန်းပုံ၊
ဧရာဝတီမြစ်တွင်းမှ ရွှေမှုန့်များနှင့် ငါးအမျိုးမျိုး ရနိုင်ရုံမျှမက ဧရာဝတီစီးဆင်းရာဒေသ ၀ဲယာ၌လည်း သစ်ပင်ဝါးပင်များ စည်ပင်လျက် ရှိခြင်း၊ ကောက်ပဲသီးနှံများ ဖွံ့ဖြိုးပွားများလျက် ရှိခြင်း၊ မြစ်တလျှောက် ၀ဲယာကမ်းခြေတွင် အဖိုးတန် ရေနံတွင်းများ အမြောက်အမြား ရှိနေခြင်း စသည်ဖြင့် ဧရာဝတီ ၏ အကျိုးကျေးဇူးများကို ဆရာကြီးတိုက်စိုးက သူ၏ ဧရာဝတီစာအုပ်တွင် ရေးသား ဖေါ်ပြခဲ့ပါသည်။
လယ်သမား လုပ်သား စီးပွားတည်ဆောက်
ထီးများ နန်းများ ငွားငွားတည်ဆောက်
သိန်းသန်းညောင်းလည်း အားကောင်းစွာပင် စီးဆင်းဆဲ။
မြန်မာလူမျိုးတို့အတွက် ချစ်သော အမိဧရာဝတီ နှစ်ပေါင်းထောင်သောင်း သိန်းသန်း တိုင်မက အနှောက်အယှက် ဘေးရန်ကင်းစွာ အစဉ်သဖြင့် စီးဆင်းနိုင်ပါစေ ဆန္ဒပြုလျက်....။
Posted by စုချစ် at 9/23/2011 08:30:00 AM
အမရေ၊ ဧရာဝတီမြစ်ကြီးနဲ့ ပက်သက်ပြီး ထပ်တူထပ်မျှ ခံစားရပါတယ်၊ ဧရာဝတီ အဓွန့်ရှည်ပါစေ ...
ညီမ စုချစ်သူ နဲ့ အတူ
ကန့်ကွက်ပါတယ် မြစ်မင်းဧရာ ကမ္ဘာတည် သ၍ ရှိစေသော်
ဧရာဝတီ အစဉ်သဖြင့် သဘာဝအတိုင်း တသွင်သွင် စီးဆင်းနိူင်ပါစေ။
Poet, writers, novelists are good command in artistic and naturalistic views and compositions. I love following story too :
(ဧရာဝတီ အထက်ပိုင်းဆီသို့ ဆန်တက်သောအခါ)
Poet, writers, novelists are good command in artistic and naturalistic views and compositions. I love following story too.